Xiaomi က Populele LED ကိုဘလူးတုသ်ကို USB စမတ် Ukulele ၏စျေးနှုန်း ...
အစ » ထုတ်ကုန်များ » အိမ် » Xiaomi က Populele LED ကိုဘလူးတုသ်ကို USB စမတ် Ukulele
အစအိမ်Xiaomi က Populele LED ကိုဘလူးတုသ်ကို USB စမတ် Ukulele
Xiaomi က Populele LED ကိုဘလူးတုသ်ကို USB စမတ် Ukulele
စျေးနှုန်းသမိုင်း Xiaomi က Populele APP ကို ​​LED ကဘလူးတုသ်ကို USB စမတ် Ukulele 1pc
€ 69,59 - 2019 19 ဇွန်လ
€ 71,38 - 2019 16 ဇွန်လ
€ 80,30 - 2019 15 ဇွန်လ
€ 71,38 - 2019 10 ဇွန်လ
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 80,30 - 2019 15 ဇွန်လ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 69,59 - 2019 19 ဇွန်လ
Xiaomi က Populele APP ကို ​​USB Bluetooth ကိုစမတ် Ukulele 1pc LED
Populele APP ကို ​​LED ကဘလူးတုသ်ကို USB စမတ် Ukulele 1pc
Xiaomi က Populele U1 23 "စမတ်ဖျော်ဖြေပွဲ Ukulele Ukelele ရှိသည် Kit
Xiaomi က youps ထံမှ Populele223 လက်မ LED ကိုဘလူးတုသ်ကို USB စမတ် Ukulele
Ukulele Xiaomi က Populele ဘလူးတုသ်ကို USB စမတ်ထိန်းချုပ်ရေး app ကို 4pcs #06622049
Xiaomi က Populele U1 အရင်ကဆိုရင်များအတွက် Intelligent Ukulele APP ကို ​​23 လက်မစမတ်ဖုန်းကို ukulele Uke ဆုကြေးဇူးကို ...
ဒါကအခုမှစများအတွက်လက်တွေ့သင်ယူမှု ukulele ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလေ့အကျင့်သင့်လျော်သော Fingerboard လျင်မြန်စွာအလွယ်တကူ ukulele နှင့်ကစားရန်သင်ယူဖို့စတင်သင်ပေးဖို့အလင်း, ဘလူးတုသ် / USB မှ connection ကို, app ကိုပြသသောဗီဒီယိုများနှင့်ဂိမ်းများ LED, တောင်မှလက်ရှိကစားသမားများထပ်မံသူတို့၏စွမ်းရည်ကို Top မှအသုံးပွုနိုငျဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ fretboard ပေါ်မှ LED မီးအလင်းတည်နေရာ, ထို့နောက်ကစားသမားရုံအလင်း volgende, သူတို့ကတစ်ဦးသီချင်းကစားနိုင်ပါတယ် play ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ ဒီ app ကစားသမားတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောင့်လေ့လာသင်ယူနိုင်ပြီး, ဂိမ်းသင်ယူမှုပျော်စရာမွေ့လျော်ဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်, ukulele ၏ဗီဒီယိုများအမျိုးမျိုး module တွေပါဝင်သည်။အဓိကအင်္ဂါရပ်များ:
ကျူရှင်စရိတ်၏မြင့်ကုန်ကျစရိတ်ဖျက်သိမ်းရေး●ကျူရှင်-အခမဲ့ APP ကိုသင်ကြားရေး
●အချိန်-saving: င့်ကိုသင်အလွယ်တကူဆော့ကစားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူမည်, နေ့တိုင်း 15 မိနစ်ဖြုန်း
●စိတ်ဝင်စားဖို့သင်ယူမှု: ဗီဒီယိုပြသတိုက်ရိုက်လမ်းညွှန်မှု + ဂိမ်း mode ကိုသင်ယူမှုပျော်မွေ့ရန်, ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများ
တည်နေရာ● LED လမ်းညွှန်မှု, ကစားရန်ရုံကိုလိုက်နာအလင်းကိုအလွန်လွယ်ကူပါတယ်
●ဘက်စုံသုံး: တစ်ပျော်စရာ ukulele, အရင်ကဆိုရင်များအတွက်စံပြသင်ယူမှု tool ကို, သင်တို့၏မိသားစုများ, မိတ်ဆွေများနှင့်အခြားသူများအဘို့ပြီးပြည့်စုံသောဆုကြေးဇူးအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:
Size: 23 လက်မ
ပစ္စည်းမြား: A ++ panel ကို Spruce နှင့်ဥရောပမေပယ်
အကြောင်းကို 2.5 နာရီ: အချိန်အားသွင်း
အလင်းရောင်အချိန်: အကြောင်း 10 နာရီ
အားသွင်း interface ကို: မိုက်ခရို USB
Fretboard ပစ္စည်း: ကို ABS
ဘက်ထရီစွမ်းရည်: လီသီယမ်ဘက်ထရီ 800mAh
supporting device ကို: (ထောက်ခံမှုဘလူးတုသ် 4.3BLE) အထက်အန်းဒရွိုက်စနစ်အား 4.0; အထက် iPhone ကို4အထက် 8.0 ကို iOS, iTouch နှင့်
App ကိုဒေါင်းလုပ်: အသုံးပြုသူကို manual ထဲမှာ QR ကုဒ်ကို
Prouduct အလေးချိန်: 0.4000 ကီလိုဂရမ်
package အလေးချိန်: 1.8850 ကီလိုဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 58.42 x ကို 25.00 x ကို 12.00 စင်တီမီတာ / 23 x ကို 9.84 x ကို 4.72 လက်မ
package အရွယ်အစား: 60.00 x ကို 28.00 x ကို 15.00 စင်တီမီတာ / 23.62 x ကို 11.02 x ကို 5.91 လက်မ
Package Contents: 1 Ukulele x
ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး SMART UKULELE! (လုပ်ဆောင်ခြင်း THE POPULELE!)
Xiaomi ကကနေစမတ်ဂစ်တာ - mi Populele စမတ် Ukulele
ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး SMART UKULELE (POPULELE)
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Xiaomi က Populele LED ကိုဘလူးတုသ်ကို USB စမတ် Ukulele
X ကို Ukulele 1, 1 အိတ်က x x က 1 Pick, 1့String, 1 x ကို USB မှတ်တာဝန်ခံ Cable ကို x
Xiaomi က Populele LED ကိုဘလူးတုသ်ကို USB စမတ် Ukulele ဗီဒီယိုများ
€ 77,99 - 2019 19 ဇွန်လ
€ 79,99 - 2019 16 ဇွန်လ
€ 89,99 - 2019 15 ဇွန်လ
€ 79,99 - 2019 10 ဇွန်လ
အဘို့အ 256 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Xiaomi က Populele LED ကိုဘလူးတုသ်ကို USB စမတ် Ukulele
4.85ထံမှ
အားလုံးပြရန် အများစုမှာအကူအညီ အမြင့်ဆုံးခဲ့သည် Rating နိမ့်ဆုံးခဲ့သည် Rating
ခရစ် - ဇွန်လ 2019 11
ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ .... အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း။ ချက်ချင်း app ကိုအပေါ်ချိတ်ဆက်နှင့်မိနစ်အတွင်း populele play ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ! မြင့်မားအကြံပြု!
KXL - (40m အထိ) E40 လေဆာအကွာအဝေးမီတာ
ILIFE V7 လေဟာနယ်သန့်စင် - စက်ရုပ်
Xiaomi က Mi မူလစာမျက်နှာလျှပ်စစ်မုတ်ဆိတ်ရိတ်စက်
KUGOO S1 လျှပ်စစ် Scooter (30km / ဇ, 30km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)
360 S5 လေဟာနယ်သန့်စင် - စက်ရုပ်